Zanak’Antitra sa Zaza Mahiratra? | Gasy ImpACT
Hiaraha-mahalala anefa fa manana saina afaka hivelatra lavitra sy mandray zavatra betsaka ny sain’ny ankizy rehefa tsy voapepo lava. Ny fiaraha-monina misy azy ireo no mametra ny fivoarany araka ny tokony ho izy.
Voalaza fa olona tia zanaka ny Malagasy ary manana anjara toerana lehibe eo amin’ny fiaraha-monina Malagasy hatrany ny ankizy na dia teo amin’ny Ntaolo aza. Tsy misy handa an’izany angamba. Fa mba lasa koa anefa ny saina mahita ny karazana fanararaotana sy ny fanimbazimbana ny ankizy sy ny zaza amin’izao fotoana, heno sy hita etsy sy eroa.
Mety efa zava-pitranga teo amin’ny fiaraha-monina Malagasy hatrizay ve ireny fanolanana, habibiana sy fanaovana tsinotsinona ny zon’ny ankizy ireny fa saingy ny fivoarana eo amin’ny lafin’ny serasera sy ny fimparitahan’ny haino aman-jery no sahala amin’ny mampirongatra azy?
Betsaka no azo ambara mikasika an’ireo karazana tsindry azo lena mahazo ny zaza sy ny ankizy ireo. Fa zavatra anankiray no hisintonana ny saintsika androany: ny toerana fametrahana sy ny fitondrantsika Malagasy ny ankizy.
Manan-joky afak’olan-teny, Manan-jandry afak’olon’entana
Ohabolana Malagasy anisan’ny fiteny sy fampiasa matetika io hametrahana ny toerana misy ny tsirairay manoloana ny karazana andraikitra mila raisina. Misy fotoana aza lasa vazivazy hifanaovana io rehefa hifanilika andraikitra izay. Fa na tiana na tsy tiana dia mipetraka sy namolavola olona maro ny fiteny sahala amin’izao.
Ny zavatra tsy aritra tiana ambara androany dia ny hoe: Misy ireo “zoky” na “ray aman-dreny” manararaotra ny “fizokiana” ka manao tsinotsinona ny hafa – indrindra fa ny zaza sy ny ankizy. Sahala amin’ny toa hoe rehefa ankizy na zandry dia tokony “hanompo” ny lehibe. Natao hitondra ny “mavesatra” rehetra eto amin’ny tanana. Tsy manan-jo ny hitaraina fa mila mizaka manaiky ny zavatra rehetra – na ny mety na ny tsy mety. Tsy fanitsakitsahana ve izany?
« Mangina fa miteny ny olon-dehibe »
Toa mbola kely isika Malagasy dia efa tazaina ny “tsy hiteny”, “tsy haneho hevitra” fa hanaiky sy hangina manoloana ny “lehibe”.
Ny tena loza dia misy fotoana hita izao fa misy hevitra avy amina zoky isan-tsokajiny tsy mandeha amin’izay laoniny dia hoe tsy maintsy ekena satria ny zoky fanaja. Ilay fizokiana aseho anefa misy fotoana tsy midika fahendrena fa hamafisan-doha te hametraka ny tenany fotsiny ihany. Tsy efa endrika fanararaotam-pahefana ve izany?
Azo lazaina mahitsy fa betsaka ny ratra sy takaitra haterak’ireny sakana sy fefy hapetraky ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina ireny. Na tiana na tsy tiana dia voadona ny maha-olona na maha-izy ny tena amin’ny fotoana sasan-tsasany sahala amin’ireny satria tsy afaka mamboraka ny hevitra sy ny vetsovetsom-po – voahilika tsy handray anjara amin’ny fanampaha-kevitra goavana ka betsaka no manao ny tenany ho tsinotsinona aty aoriana.
Aoka kosa aloha hapetraka mazava fa ilaina ary takiana amin’ny fanabeazana ny ankizy ny fitsipi-pifehezana sy ny fanajana zokiolona. Kanefa dia mazava ho azy ihany koa fa ilaina ho voalanjalanja izany. Ny ankizy “voadaroka” ao an-trano anie mety ho hendry eo imasonao fa kosa manao ny ataony manala vokona any ivelany.
Na eny amin’ny toeram-piasana na eny amin’ny sehatra hafa: firy amin’ny Malagasy no mihanahana tsy sahy miroso na tsy mahafantatra ny tokony atao akory manoloana fanapahan-kevitra goavana? Firy amin’ny Malagasy no mpitazana fotsiny ihany manoloana ny andraikitra mila raisina?
Ilay olon-dehibe sasany tsy mandray ravin-dena fa mibaiko fotsiny amin’izao fotoana angamba dia ilay “zoky” zatra nanararaotra zandry nahafak’olan’entana azy. Ilay olon-dehibe sasany sahiram-pitenenana tsy mahalaza ny tokony ho lazaina ankehitriny angamba dia ilay “zandry” niantehatra tamina zokibe nahafak’olan-teny azy tamin’ny fotoana rehetra.
Firy amin’ny ray aman-dreny Malagasy no manana faharetana, sy finiavana ary fitiavan-janaka marina ka manabe sy mitondra ny zanany araka ny rariny sy ny hitsiny mba ho tena olom-banona mahavita azy ny zaza any aoriana? Ka rehefa lehibe ny ankizy dia mba ho olon-dehibe sady havanam-pitenenana no sady mahatapaka mandray andraikitra. Kolokoloy ny ankizy mba ho zaza mahiratra…mba ho firenena mahavita azy i Madagasikara!
Cette entrée a été publiée le vendredi 31 octobre 2014 à 11:06 et taguée Andron'ny ankizy, Fahazazana, Fahendrena Malagasy, Fanabeazana, fiaraha-monina malagasy, Firenena Malagasy, Manan-jandry afak'olan'entana, Manan-joky afak'olan-teny, Ray aman-dreny sy zanaka, Zanak'antitra, Zaza Malagasy, Zon'ny ankizy et publié dans Education, Lahatsoratra Malagasy, Social, Uncategorized.	Vous pouvez suivre les commentaires liés à cette entrée par flux RSS 2.0.
" Indépendance Madagascar: illusion et désenchantement (2e partie)
Tourisme – Destination Madagascar: La publicité ne peut vendre que ce qui est vendable »
2 responses to “Zanak’Antitra sa Zaza Mahiratra?”
[…] Tatoato dia miroborobo fatratra ny fivarontan-tena ary singanina manokana ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Araka ny voalazan’ny UNICEF dia efa ny ray aman-dreny Malagasy sasany mihitsy ankehitriny no mamporisika sy mivaro-janaka mivantana. Aiza ilay fahendrena reharehan’ny Malagasy? Ny Zon’ny ankizy? […]
Mampivoatra ve ny fiaraha-monina Malagasy? Aiza ny toeranao amin’ireto toetra 7 ireto? | Gasy ImpACT
[…] Azo heverina sy hantenaina angamba fa ny Malagasy tsirairay dia manam-paniriana ny hivoatra araka ny tokony ho izy, sahala amin’ny olona rehetra eran-tany izay mitovy filàna fototra aminy. Fa ny firaha-monina misy antsika Malagasy ve anefa manampy antsika hivelatra sy hanatratra ny tanjona sy fanirian’ny tsirairay ? Ny soatoavina Malagasy ve ampy sy manampy amin’ny fandrindrana ny fiaraha-monina ? Ny kolotsaina Malagasy ve manosika ny fivoaran’ny isam-batan’olona ? […]